Dhaawaca Liibaan Madaxweyne oo la geeyay Magaalada Gaalkacyo – STAR FM SOMALIA
Wararka ka imaanaya Koonfurta magaalada Gaalkacyo ee Gobolka MUdug ayaa sheegaya in xalay magaaladaasi la geeyay dhaawaca Liibaan Madaxweyne oo ahaa sargaal horey uga baxsaday Dowlada Soomaaliya dhawaan lagu dhaawacay dagaal uu la galay Ahlu Sunna.
Liibaan Madaxweyne ayaa lagu soo waramayaa in dhaawac culus uu kasoo gaaray dagaalkii uu dhawaan magaalada Dhuuso Mareeb kula galay Ahlu Sunna, waxaana lagu fashilmay in dhaawaciisa la geeyo dalka Itoobya si wax looga qabto.
Ahlu Sunna oo dareentay in xaalada sargaalkan uu yahay mid aan hagaagsaneyn ayaa habeen hore waxa ay ku wareejiyeen Odayaal beeshiisa kasoo jeeda si loo soo daweeyo, waxa ayna Odayaashan xalay geeyeen Koonfurta Gaalkacyo uu ka taliyo maamulka Galmudug.
Maanta ayaa lagu wadaa in Qaliin lagu sameeyo dhaawaca Liibaan Madaxweyne, oo xaaladiisa ay tahay mid culus , waxaana Isbitaalka Carafaad ee la geeyay dhaawaca Sargaalkanisugu tagay dhaqaatiir badan si ay qaliin ugu sameeyaan.
Afhayeen u hadlay Ahlu Sunna ayaa xaqiijiyay in dhaawaca Liibaan Madaxweyne la geeyay Isbitaal kuyaala magaalada Gaalkacyo, waxa uuna tilmaamay in Sargaalkaasi ay filayaan in gacantooda lagu soo celiyo marka uu caafimaado si ay maxkamad usoo taagaan.
Maamuulka Galmudug oo dhaawaca sargaalkan la geeyay deegaanadooda ayaan wali ka hadlin, waxa uuna Liibaan Madaxweyne kamid ahaa Saraakiishii Ciidanka Milatariga Soomaaliya ee ku sugnaa deegaanada maamulka Galmudug halkaas uu markii dambe ka baxsaday isga iyo hub uu watay kuna biiray Ahlu Sunna.
Faah faahin dheeraada ah oo laga helaaayo qarax yadii kadhacay sakay muqdisho(Daawo Sawirada)